Kubatwa naThembeka Ndichisvira Shamwari Yake muSwimming Pool – VanodaZvinhu
by DrSviro · January 28, 2016
Ndiri murume ane makore 26 ndinonzi Tinashe, ndaigara hangu pane imwe flat muJoburg and was sharing neumwe musikana aishandira kuPretoria.
Zvakaitika musi uyu takaswera takagara pamba watching TV, kwaipisa zvokuti apa Thembeka had said her friend Thuli aiwuya to spend time naye. Takagara hedu drinking and then Thuli akabva asvika she was dropped off namai vake, apa mai vake vainge vakanaka apa vaiita kunge mudiki kumwana wavo. We continued hedu drinking and Thuli joined us, tiripakati pekunwa we decided kuenda kuno swimmer since pataigara paive ne swimming pool. Thembeka aitya mvura apawo Thuli ainge asingagone kuswimmer, ndaitya kuti ndikaenda navo vese vari 2 handaizogona kuvabatsira vese since we decided kuita ma swimming lessons. Luckily my cousin Mike akabva asvika tikabva taenda kupool tava 4 manje.
Thuli ainge akanaka aine makumbo anenge fanta chaiyo, she was short ane mazamu nemagaro mahombe. Ndakaenda kuno swimmer ndakapfeka kashort apa ndisina kupfeka pant mukati, Thuli akapfeka kaswimming costume kaThembeka apa it was very tight zvekuti zvidya zvake waibva waona kusimba kwake apa makumbo ese aripachena. Thembeka just wore kashort kadiki diki and my cousin went with his boxers. Takasvika ku pool and while my cousin was busy trying to get Thembeka kuti amire pamasteps epool inini was already kushallow end naThuli, ndainge ndatonakirwa naye but handina hangu kumuudza and iye anenge aitonge akudawo nezvangu. Ndiri busy kumabatsira kuti aswimme, one zamu rake rakapukunyuka mu costume imi kaimi pandakariona mboro yangu yakabva yatanga kumira.
Ndakazama kuzviviga asi my cousin akazviona, since painge pasina progress naThembeka they decided kuenda havo kumba. Ndakasara naThuli tiri two hedu, I was trying kuti arare pamusoro pemvura to float asi akavhunduka achifunga kuti she will drown akabva andibatirira apa ruoko rwake ndokubva rabata mboro yangu yainge yakamira. Ndakafunga kuti haana kuzvinzwa since aiva in a panic state asi nekumira kwayainge yakaita akazvidzwa apa she was so close to me zvekuti she had given me her behind akatarisa rimwe side. Mboro yangu yakabva yamuguma magaro and akainzwa for the second time. Akatanga kunyara nyara then akanditarisa akabvunza kuti what’s that chandiguma, there was no need to lie ndakamuudza kuti imboro yangu and ndiye aiita kuti imire, she started blushing.
Takatarisana for a while ndikaziva kuti hapasisina zvekumirira and I made the first move ndikabva ndamukisa, ndkafunga kuti achandituka but akabva andikisawo back. Takatanga kukisana tiri kushallow end we moved inside a bit kuti ndinyatsowana balancer with the help yemvura. Ndakamubata bata zvese but handina kuziva kuti atota here since taiva mumvura but ndakanzwa kufemera pamusoro kwaainge akuita ndikaziva kuti avabho. Ndakangosverera nezvigunwe ndikaisa ka costume paside ndikabva ndaipfekedzera mboro yangu mukati, mwana akaita kuti aahhh kuratidza kuti ainzwa kuti yapinda. Ndakamusvirira mupool imomo zvekuti munhu aitya mvura ndakashaya kuti zvakaenda kupi , mwana akaita chikapa iyeye kunge munhu asiri mumvura apa ainge akandibata nemaoko muhuro. Takasvirana costume yake iri paside kusvira tese tatunda. Takamboramba takahagana tirimuvhura kudaro, Thembeka akabva adzoka achibvunza kuti tirikuuya here or we are now busy getting naughty. We both laughed and takangoti dai waiziva zvataita kare ungadai usingadaro. Ndakanakirwa imi , kusvirira mupool was just something chandaida kuita it was on my bucket list….
by DrSviro · Published June 19, 2014
by DrSviro · Published December 28, 2015
Next story Ndakasvirana neMukomana Wangu Ndikaona Nyenyedzi !
Previous story Aigara achida zvekukwira, saka ndakazomugadzirira size tiri mubath yepaAirport